विश्वकै उत्कृष्ट तस्बिर पछाडिको मर्माहत कथा « Sudoor Aaja
१० कार्तिक २०७८, बुधबार १३:३१
विश्वकै उत्कृष्ट तस्बिर पछाडिको मर्माहत कथा
सुदूर आज १० कार्तिक २०७८, बुधबार १३:३१
काठमाडौं । यो तस्बिर यतिबेला विश्वभरका मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक शेयर गरिएको छ । सबैतिरबाट चर्चा बटुलिरहेको यो तस्बिर पछाडिको कथाले धेरैलाई मार्मिक पनि बनाइदिएको छ । सिएना अवार्डस् २०२१ मा यो तस्बिर वर्षकै उत्कृष्ट घोषित भएको छ ।
यो तस्बिर लिने फोटोग्राफर, मेहमेत अस्लनले यसलाई ‘जीवनका कठिनाइहरु’ नाम दिएका छन् । र वास्तवमै यसलाई हेर्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि जीवन वास्तवमै कठिन छ र कतिका लागि अत्यन्तै क्रुर पनि छ । तर यस्तो कठोरताका वावजुद बाबु छोरा दुवैको अनुहारमा मुस्कान देख्न सकिन्छ ।
वास्तवमा बाबु मुन्जीर, सिरियाको इड्लीब बजारमा हिँडिरहँदा माथिबाट बम खसि बिस्फोट हुँदा उनले आफ्नो दाहिने खुट्टा गुमाउनु परेको थियो । यो तस्बिर चाहिँ टर्कीको हेते प्रान्तमा खिचिएको हो ।
उनका छोरा मुस्तफा भने जन्मदै हात खुट्टाबिना जन्मिएका थिए । तर यो पनि युद्धकै परिणामले भएको हो । यसलाई ‘टेट्रा–एमिलिया सिन्ड्रोम’ भनिन्छ । युद्धका बेलामा उनकी आमा जेनेपले ‘नर्भ ग्यास हमला’ पश्चात् लिनु परेको औषधिका कारण उनमा त्यो स्थिति पैदा भएको थियो ।
यस्तोमा मुस्तफालाई भविष्यमा विशेष किसिमको विद्युतीय प्रोस्थेसेस् अर्थात कृत्रिम हातखुट्टाको आवश्यक पर्नेछ । तर दुर्भाग्यवश् अहिले त्यो टर्कीमा उपलब्ध छैन । द गार्जियनबाट
यो हो संसारकै महंगो फल : एउटा गेडाको मूल्य १६ लाख रुपैयाँ !
काठमाडौं । संसारमा अनेक खालका फलफूल पाइन्छन् जसको मूल्य पनि थरीथरी हुन्छ । जापानमा पाइने एउटा खरबुजा चाहीँ संसारकै सबैभन्दा
२० महिनापछि अमेरिकी सीमा खुल्दै, खोप लगाएकाहरु जान पाउने
काठमाण्डाै – अमेरिकाले २० महिना लामो आवागमन प्रतिबन्ध अन्त्य गर्दै आजदेखि पूर्ण मात्रा खोप लगाएका विदेशी यात्रुहरूलाई आफ्नो सीमा खुला गर्दैछ
मंसिर ३ मा चन्द्र ग्रहण लाग्ने
काठमाडौं- मंसिर ३ गते शुक्रबार चन्द्र ग्रहण लाग्ने भएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले १९ नोभेम्बरमा चन्द्र ग्रहण लाग्ने जनाएको
चार वर्षपछि प्रधानमन्त्ती देउवा र समकक्षी मोदीबीच भेट, के भयो कुराकानी?
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन कोप २६ का